Helitaanka Cimilada Wanaagsan ee Safarka Kariibigaaga
Sida Loo Helo Cimilada Wanaagsan ee Safarka Kariibigaaga
Cimiladu waxay sameyn kartaa ama jebin kartaa fasaxaaga Caribbean. Duufaannada iyo duufaanka kale maahan kuwo gebi ahaan la saadaalin karo, laakiin waxaa jira talaabooyin aad qaadi kartid si aad u hubiso in safarkaagu uu ku qarashgareeyo qorraxda, oo aan saliid xumeynin!
Waqtiga Loo Baahan Yahay: 1 saac oo jimicsi baadhitaan ah; daqiiqado yar oo kormeer ah warbixinta cimilada.
Waa kuwee sidan:
Iska ilaali xilliga duufaanta ugu sarreysa. Xilliga harikeyn ee Atlantic , oo ay ku jiraan Caribbean, ayaa si rasmi ah u socda Juun ilaa Nofeembar . Laakiin saddex meelood saddex ama wax ka badan duufaanka iyo duufaannada kulaaluhu waxay dhacaan inta u dhexeysa bilaha Ogost ilaa Oktoobar, iyada oo hawlaha duufaantu ay soo fiiqayaan horraantii bartamihii Sebtembar. Wixii kharashka ugu fiican ee safar qorrax leh, iska ilaali socdaalka Kariibiyaanka inta lagu jiro xilliyada duufaanta ee ugu sarreysa.
Dooro jasiir ka baxsan aagga duufaanka. Jasiiradaha koonfurta Caribbean waxaa si aad ah u dhuftey harikeyn ama duufaan kulaaleed. Jasiiradda Antilles - Aruba , Bonaire , iyo Curacao - waxay ka baxsan yihiin duufaannada ugu badan, sida Trinidad iyo Tobago iyo Koonfurta xeebta, sida Grenada iyo Barbados .
La soco duufaanada kulaylaha. Qof kastaa wuxuu ka welwelaa harikooyinka, kuwaas oo u muuqda in ay qabsadeen cinwaanada. Haseyeeshee, duufaannada kulaylaha badani way ka badan yihiin, oo waxay u badan tahay inay ku rusheeyaan biyaha qabow (ha ku sheegin dabaysha) fasaxyadaada. Sida duufaannada, xilliga halista ee duufaannada kulaylaha waa Juun-Nofeembar, dabeylaha ugu badnaa inta u dhaxaysa bilaha 8aad iyo 10aad.
Raadi dabaysha ganacsiga. Duufaannada ganacsiga, oo bari iyo galbeedka ku yaalla Atlantic, waxay keenaan breezes joogta ah (iyo roobab casri ah) oo ku yaal Netherlands Antilles oo caawiya heerkulka dhexdhexaadka ah ee Windward Islands ( Martinique , Dominica , Grenada , St. Lucia , St. Vincent iyo Grenadines ). Dabayshu waxay siinaysaa jasiiradaha sida Aruba oo deggan iyo cimilada xasilloon, laakiin sidoo kale waxay abuuraan jawi cilad ah oo cawska u eg.
Ha iloobin "rukunka kulaylka." Cimilo-ilaaliyeyaashu waxay diirada saaraan dhacdooyinka waaweyn sida harikeyn iyo duufaannada kulaylaha, laakiin mawjadaha kulaylaha ayaa sidoo kale keeni kara roobab badan Caribbean xitaa haddii aanay ku dhicin duufaan buuxda oo duufaan leh ama duufaan.
Eeg deymaha. Goobta dabaysha ee jasiiradaha Caribbean waxay u muuqdaan kuwo roobab iyo dabayl badan, gaar ahaan kuwa buuraha sare leh. Dabaylaha ka sii dari kara waxay inta badan ku dhuftaan Kariibiyaanka waqooyi-bari, sidaas darteed waxaad ka heli doontaa cayayaanka, cimilada ugu kulul ee galbeedka iyo koonfur-galbeed (leeward) dhinacyada jasiiradaha badankood.
Ka feker badan oo hooseeya. On jasiiradaha sida Jamaica , Cuba iyo St. Lucia , safarka sare ee sare u noqon karaa mid aad u qabow ka badan kuwa heerka badda. Buundooyinka Blue ee Jamaica, oo leh meelo badan oo ka mid ah dalxiisyada, ayaa laga yaabaa inay marmarsiiyo qoyan. Haddii aad rabto qorraxda iyo kulaylka ugu kulul, ku dhaji xeebta.
Si joogto ah u hubi warbixinta cimilada. Kariibiyanku waa meel weyn, oo leh kumanaan jasiirado ah. Xitaa dhererka xilliga harikada, waxaa jira fursad yar oo duufaan weyn oo carqaladeeya safarkaaga. Ha u maleyn in duufaanka "Caribbean" uu ku dhufan doono jasiiraddaada - haddii saadaasha deegaanka ahi uu cad yahay, bac ka dibna u tag! Xarunta Dumarka Qaranka ee Maraykanku waa khayraadka ugu wanaagsan ee loogu talagalay macluumaadka duufaanta hadda.
Haddii aadan ku fikirin roobka, oo aad jeceshahay kaymaha roobka kulaylaha ah, u qorshee safarka Dominica : waxay roobab badan ka heli doontaa meel kasta oo adduunka ah, in ka badan 300 oo sanno. Dhab ahaantii, kicinta kaymaha roobka ee jasiiradaha sida Puerto Rico waxay noqon kartaa madadaalo xataa maalin daruuro leh.
Bermuda waa marka laga reebo sharciyo badan oo ku saabsan cimilada Caribbean: waxay ku taallaa isla gobolka North Carolina, taasoo macnaheedu yahay in kuleyliyadu yihiin kuwo aad u jilicsan, waxaadna dooneysaa inaad safarto inta u dhexeysa May-Sebtembar haddii qorshooyinkaaga ay ku jiraan dabbaalan iyo dabbaaldeg.
Ka soo horjeeda roobka roobka leh adoo dooranaya adeeg buuxa oo bixiya waxqabadyo gudaha ah oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo caruurta, ama mid leh casino ama barkad gudaha ah.
Khariidadda jasiiradaha ee aad qorshaynayso inaad booqato
Helitaanka goobaha internetka ama kheyraadka kale ee warbixinta cimilada
Hubi Heerarka Kariibiyaanka iyo Dib u eegista Goobta
16 Kariibiyaan Caribbean ah oo Beerka ku garaacaya
Kusoo Caribbean Hotel iyo Zine Resort All-Inclusive
Ku booqo guriga St. Croix Home of Cruzan Rum
Saamaynta Dalxiiska ee Haiti Dhulgariirka
Diyaaradaha Caribbean Times
Ku dabaaldeg mahadnaqidda Kariibiyaanka
Sida loo iibsado Cuckoo Saacadda Jarmalka ah ee Authentic
Yaa ka ciyaaraya ciyaaraha jimicsiga ee jimicsiga? Isku Dhiibo Brooklyn!
Farshaxanka & Dhaqanka
Tilmaamaha Hagaajinta Hagaajinta San Jose ee Soo-booqdayaasha iyo Ardayda
Barkadaha sare ee Cocktail ee Albuquerque
Hotelka ugu fiican ee kuyaala magaalada San Francisco
Arizona Golf Gifts
7da ugu fiican ee la mamnuucayo in lagu iibsado 2018
5 Badweynta Xisbiyada ugu Wanaagsan Koonfurta Ameerika
Su'aalaha ugu dambeeyay ee XAAD LAMAAN iyo Sida aad u yareyn karto sugitaanka
Muhiimadda midabka cas ee Ruushka Ruushka
Roxbury Lodging Contemporary
20 Waxyaabaha Lagu Sameynayo Sandy, Utah
Waa maxay Hydrafacial?